Iziko lokuguqula i-CNC, i-CNC Lathe Machine, uMthengisi kunye nabavelisi base China
Ulapha: Ekhaya1 / Iziko lokuguqula i-CNC, i-CNC Lathe Machine, uMthengisi kunye nabavelisi C ...
PRECISION EZIPHAKAMILEYO MULTI AXIS CNC TURNING IZIKO
I-Tsinfa ngumboneleli oqeqeshiweyo kunye nomenzi we-CNC umatshini wokujika e-China. Iziko lokujika le-CNC linemisebenzi ebanzi, umgangatho ophezulu wokuchwetheza kunye nesantya esiphezulu. Ubukhulu becala esetyenziselwa ukuqokelela iindawo ezijikelezayo, ngokubanzi zinokugcwalisa ngokuzenzekelayo umphezulu we-cylindrical, umphezulu oyindilinga, umphezulu wokubhola, ukubhola, indawo yokugaya, kunye nokulungiswa kwemisonto, nayo inokuqhubekeka nomphezulu ojikelezayo ojikelezayo, njenge-hyperboloid. I-axis ezininzi zinokongezwa ngokwemfuno: c lathe lathe, 3 axis lathe, 2 axis lathe, 5 axis CNC lathe, 4 axis CNC lathe.
Ukusebenza okuphezulu: Kwiziko lokujika le-CNC, emva kokuba indawo yokusebenza icekiwe kube kanye, inokugqibezela iindawo ezijikayo, ukugaya, ukubhola, ihenjisi, ukuqhubekeka ngemisonto, kunye nezinye iinkqubo zokwenza.
Ukuqina Strong: Ibhedi inyangwa ngokukodwa ukuphelisa uxinzelelo lwangaphakathi.
Ukuchaneka okuphezulu: I-lathe ye-CNC isebenzisa ngqo i-servo motor ukuqonda intshukumo yesondlo ngebhola yokuqhuba isiliphu sokuqhuba kunye nokuphumla kwesixhobo, ke ngoko inkqubo yesondlo ilula kakhulu.
Imibuzo? okanye ufuna ixabiso?Sinike umnxeba ku + 86-15318444939, Kwaye uthethe nenye yeengcali zethu.Unokugcwalisa yethu: ifom yoqhakamshelwano.
Umatshini wokujika othe tyaba we-CNC uyathengiswa:
TFA40 CNC ukujika umatshini
Ububanzi bokujikeleza i-400mm, i-30/45 yokuthambeka kwebhedi, ukususwa kwe-chip efanelekileyo, ukuqina okuqinileyo
TFA40-S CNC iziko ukujika 3 axis
8 station cutter tower, yokugaya, ukubhola, ukujika, ingaqhubekeka, inkqubo ye-CNC
TFA40B umandlalo slant CNC lathe 2 axis
Ububanzi be Rotary ngu-400mm, ubude bokusebenza yi-500-1000mm, kwaye umatshini wokususa i-chip ungasetyenziselwa ukususwa kwe-chip ngokuzenzekelayo.
TFA-8S CNC iziko ukujika 4 axis
Isixhobo sokuguqula isitishi esine-8, Iintloko zamandla ezi-Angle ezingama-90, Iintloko zamandla ze-Angle ezine
TFA50 CNC iziko ukujika
LTK series umandlalo flat CNC umatshini lathe
Ixabiso elincinci, ububanzi be-360-16000mm, ubude bemishini 500-5000mm,
I-CNC yokujika ividiyo yomatshini:
Sinako ngokusesikweni ngokweemfuno zakho, qhagamshelana nathi ukuba isisombululo kunye nekoteyishini
Inzuzo yomatshini wokujika we-CNC:
Iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo: Inkqubo ye-CNC yokulawula, ngokwe-teknoloji yokuqhubela phambili inkqubo, iinkqubo ezininzi zigqityiwe ngexesha elinye. Iyakwazi ukuxhotyiswa nge-hydraulic chuck, isihlalo somsinga we-hydraulic kunye nengalo yeerobhothi yokulayisha ngokuzenzekelayo kunye nokwehlisa ukusebenza, okusindisa kakhulu abasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso.
Ukususwa okulula kwe-chip: ibhedi yokuthambeka ngokuzithandela, i-chip yentsimbi ngokwendalo iwela kwibhokisi yokuqokelelwa kwe-chip, inokwenziwa nge-chainplate conveyor chip ukususwa.
Ukhuseleko olulungileyo: Ukhuseleko olufakwe ngokupheleleyo luyamkelwa.
Isantya esiphezulu: Isantya sokulinganisa esilinganisiweyo siyafumaneka ukusuka kwi-1600 ukuya kwi-4500 Rpm
Yintoni iziko lokuguqula i-cnc?
Eqhelekileyo lathes CNC lathes babe nezamazembe ezimbini, X kunye Z. iziko Ivula babe nezamazembe ezininzi, 3 namazembe, 4 namazembe, 5 namazembe, njalo njalo. Ukongeza ekusebenzeni kokujika kunye nokugaya, inomsebenzi wokusebenza okuphezulu. Amaxesha nokubotshwa ziyancitshiswa.
Ukushwankathela, iziko lokujika le-CNC lineempawu ezilandelayo:
(1) bhetyebhetye Strong, efanelekileyo ukuqhubekekiswa multi-ezahlukeneyo kunye namalungu ibhetshi amancinci.
Kwindawo yendalo ezenzekelayo okanye ezenzekelayo yendalo eqhubayo icandelo elitsha, ngokubanzi kufuneka linyanzelise isixhobo somatshini okanye izixhobo zomatshini, ukuze kube lula ukuyisebenzisa.
Isixhobo somatshini siyaziqhelanisa neemfuno zamacandelo okuqhubekeka, ngelixa usebenzisa i-lathe ye-CNC ukuqhubekeka iinxalenye zeemilo ezahlukeneyo, kufuna kuphela ukuphinda wenze inkqubo kwakhona okanye uguqule inkqubo yovavanyo
Inkqubo (isoftware) inokukhawulelana ngokukhawuleza neemfuno zokucwangciswa kwaye inciphise kakhulu ixesha lokulungiselela ubuchwephesha bokutshintsha isixhobo somatshini
Ilungele ukwenza iintlobo ngeentlobo, iqhekeza elinye, okanye inkqubo encinci yebhetshi.
(2) ukuchaneka machining High kunye uzinzo elungileyo
Ngenxa yokudityaniswa kobuchwephesha obuphezulu kunye nobutsha obufana nomatshini nombane, ukuchaneka kokuchaneka kwezixhobo zomatshini ze-CNC ngokubanzi kuphezulu kunezinto zomatshini oqhelekileyo. Ukuphuhliswa kwezixhobo zomatshini we-CNC.
Inkqubo machining ilawulwa yi-computer ngokungqinelana nenkqubo pre igalelo, nto leyo ethintela inqanaba elibi lobugcisa yomqhubi.
Umahluko kumgangatho wemveliso obangelwa ngumahluko. Kweminye imisebenzi yokusebenza eneemilo ezintsonkothileyo, phantse akunakwenzeka ukuba izixhobo zomatshini eziqhelekileyo zizigqibe.
Kodwa isixhobo somatshini we-CNC siqulunqa kuphela inkqubo enobunzima ngakumbi ukuze sikwazi ukufikelela kwiinjongo, xa kukho imfuneko sinokusebenzisa inkqubo encediswa yikhompyuter okanye ikhompyuter ukubala
Ukulungiswa ngoncedo lwekhompyuter. Ukongeza, inkqubo ye-machining yesixhobo somatshini se-CNC ayichaphazeleka kukutshintsha komzimba kunye neemvakalelo zomqhubi.
(3) Inemveliso ephezulu kunye nexabiso eliphantsi lokuqhubekeka
Imveliso yesixhobo somatshini ikakhulu ibhekisa kwixesha elifunekayo lokuqhubekeka nenxalenye, kubandakanya nexesha lokuqhuba kunye nexesha lokuncedisa. inombolo
Isantya yokuluka kunye nesantya feed ye lathe zingalawulwa kuluhlu olubanzi, kwaye stepless isantya ummiselo zingamkelwa. Esona santya siphezulu sokusika sinokukhethwa ngexesha lokuchwetheza.
Ukulungiselela iiparameter zokusika, imveliso iphuculwe kakhulu,
Iindleko zokuqhubekeka ziyancitshiswa, ngakumbi kumacandelo emveliso eninzi, enkulu ibhetshi, isezantsi iindleko zokuqhubekeka.
Kwimveliso yobuninzi, ngakumbi imveliso yobunzima, ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza kakuhle kufuneka kugxininiswe kwisiseko sokuqinisekisa umgangatho wokuqhubekeka
Uzinzo lwenkqubo, itekhnoloji yokuqhubekeka kunye nebhetshi enye encinci yahlukile. Umzekelo, ukhetho lwemidlalo, ulungiselelo lwendlela yesixhobo, kunye nolungiselelo lwezixhobo
Indawo kunye nokulandelelana kokusetyenziswa kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngononophelo, kwaye imixholo efanelekileyo iya kwaziswa kwicandelo elilandelayo.
Ukuchasana nemveliso yobuninzi yimveliso enye. Olona phawu lubalulekileyo kwimveliso yento enye kukuqinisekisa inqanaba lokupasa lokuqala, ngakumbi umgangatho omnye.
Icandelo elinemilo entsonkothileyo kunye neemfuno ezichanekileyo eziphezulu. Okwesibini, xa kuthelekiswa nenqanaba lempumelelo kwimveliso yento enye. Imveliso enye
Inkqubo ye-NC esetyenzisiweyo yahlukile kwimveliso yobuninzi kwimiba yendlela yesixhobo, ukucwangciswa kwesixhobo, kunye nokuseta indawo yokutshintsha izixhobo. Kunye nemveliso yebatch
Xa kuthelekiswa nemveliso, imveliso enye kufuneka ithintele ixesha elide kakhulu lokulungiselela imveliso.
Zeziphi iintlobo zokujika kweziko?
Iziko lokujika ngokubanzi lithetha ngokudibanisa kwemingxunya emininzi kwi-lathe ye-CNC, ukuze i-lathe ingabi nomsebenzi wokujika kuphela kodwa ibenomsebenzi wokugaya. 3 axis ukujika umatshini, 4 axis, 5 axis.
Ngokutsho engile kwebhedi ukuthambeka, oko lungohlulwa lube kwiziko ukusika umandlalo tyaba kunye neziko ukuthambeka ukusika ukhuko.
Ngokwendawo yokuluka, inokwahlulwa ibe yindawo yokujika emi nkqo kunye nendawo ejikelezayo ethe tyaba.
Ngokutsho ngobubanzi ezahlukeneyo rotary kunye nobude machining, oko lungohlulwa lube ukujika iziko enzima kunye neziko ukukhanya ukujika.
Luluphi ukhuseleko ngokubanzi ekujikeni kwe-cnc?
Kwinkqubo yokujika neziko lokujika le-CNC, izinto eziphambili zokhuseleko zezi zilandelayo:
1.Xa edibanise yokuluka ngesantya esiphezulu, ulwelo ukusika uya kukutshiza kwi workpiece ujikeleza.
Isantya sokusebenza esinejubane eliphezulu, kukho umngcipheko wokwaliwa
3. Umngcipheko womothuko wombane obangelwe kukuvuza kwamandla
4. Impazamo yenkqubo, ekhokelela kumngcipheko wokungqubana kwesixhobo.
Ngenxa yobungozi obungasentla, kufuneka abasebenzi balandele incwadana yezokhuseleko yokusebenza
1. Vala umnyango okhuselayo ngexa lokuchwetheza ukunqanda ukusika ulwelo ekuchazeni
2. Xa usebenzisa i-chuck ethembekileyo, qiniseka ukuba ujonga kwaye utshixe i-chuck xa ubambelela kwindawo yokusebenza. Kwangelo xesha, vala umnyango okhuselayo, kwaye sukuma ngqo ujongane nomsebenzi.
3. Usebenziso olukhuselekileyo lombane kunye neziseko ezichanekileyo. Lungisa izixhobo ngaphandle kombane.
4 jonga inkqubo yokuqinisekisa ukuba ichanekile ngaphambi kokuba yenziwe.
Zeziphi iimveliso ezenziwe ngomatshini wokugaya we-CNC kunye nokujika?
-Imveliso zenziwe nge-CNC yokugaya
Iindawo Box, iindawo umphezulu entsonkothileyo
Njengazo zonke iintlobo zokuhambisa, ivili lesikhokelo somoya, umphezulu wokungqukuva, zonke iintlobo zobuso bokwenza isikhunta, i-propeller kunye ne-propeller yezithuthi eziphantsi kwamanzi, kunye nezinye iimilo zobume bendawo yasimahla, ezo ndawo zinokuqwalaselwa liziko lokuchwetheza. Ukunyanzeliswa okuphezulu, ukungunda ngenaliti, ukungunda kweerabha, ukungunda okubumba ifriji, ukungunda kwefriji, uxinzelelo lokuphosa uxinzelelo, ukungunda ngokuchanekileyo, njalo njalo
-Imveliso zenziwe ngokuguqula umatshini
I-lathe ye-CNC inokuqhubekekisa iimveliso ezininzi, kunzima ukudwelisa nganye nganye. Ngamafutshane, i-CNC lathe ikakhulu iinkqubo ezijika iinxalenye, ezinje nge-shaft, sleeve, disc, njl.
Nguwuphi umatshini we-CNC osetyenziselwa ukujika izinto?
Ukujika luhlobo lwendlela yokuchwetheza apho i-workpiece ijikelezayo kwaye imoto iqhuba isiphatho sesixhobo kwaye iqhube isixhobo sokondla. Zininzi iintlobo zelatti ezinokuqhuba olu hlobo lokuchwetheza:
Umatshini we-CNC othe tyaba, umatshini we-CNC othe nkqo, umatshini wokujika we-CNC.
Loluphi uhlobo workpiece na CNC lathe efanelekileyo processing?
1. Iinxalenye ezijikelezayo ezinomjikelo onzima okanye onzima ukulawula ubungakanani
Ngenxa yokuba iziko lokujika le-CNC linomsebenzi ojikelezayo kunye nesetyhula wokudibanisa, kwaye ezinye iziko lokujika le-CNC linomsebenzi ongekho setyhula.
Ngomsebenzi wokudibanisa ijika, inokujika iinxalenye ezijikelezayo ezenziwe nangayiphi na ijika lomjikelo wenqwelomoya, kubandakanya iinxalenye ngokubala okufanelekileyo.
2. iindawo ngobuciko High
Ukuchaneka kweemfuno zamalungu ikakhulu kubhekisa kwiimfuno ezichanekileyo zobungakanani, imilo, isikhundla, kunye nomphezulu, phakathi kwawo ukuchaneka komphezulu ikakhulu kubhekisa kuwo
Uburhabaxa bomhlaba. Umzekelo, ukuchaneka kokuphakama kuphezulu, iinxalenye zesilinda ezineemfuno eziphezulu zesilinda;
Amacandelo e-Cone aneemfuno eziphezulu zokuthe tye, ukujikeleza kunye nokuthambekela komgca; izahlulo ezineemfuno eziphezulu zeprofayili yomgca (imilo entle yentsaba)
Kwi-lathe ekhethekileyo ye-CNC ngqo, ukuchaneka komjelo wejiyometri nako kungumatshini ophakamileyo kakhulu.
3. Ukwenziwa komsebenzi onzima
Ekusebenzeni enkulu ngumngundo, kukho iindawo ezininzi kunye nobukhulu enkulu kunye nemilo entsonkothileyo. Ukuchaphazela kwala malungu emva konyango lobushushu kuncinci.
Kunzima ukusila iindawo eziqinileyo ngenxa yobukhulu bazo obukhulu,
Faka endaweni yokuguba ujike ukuphucula ukusebenza ngokukuko.
Isiqwenga 4.Work ngenkqubo entsonkothileyo
Indawo yokusebenza ifuna ukujika isangqa sangaphandle, ubuso bokugqibela, indawo yokugaya ecaleni, ukubhola. Olu hlobo lomsebenzi ngokuqinisekileyo ludinga izixhobo zomatshini ezintathu zokulungiswa, i-lathes, oomatshini bokugaya, oomatshini bokugrumba, ukulayisha kunye nokothula izinto kunzima, ungathenga indawo yokujika ukuze uyenze.
I-CNC yokuguqula iindawo zomatshini
Isixhobo esisetyenziselwa ukubamba into yokusebenza kwilaphu elibizwa ngokuba yindawo yokulungisa.
Izinto ezenziwa ngomthi weLathe zinokwahlulwa zibe zizixhobo eziqhelekileyo kunye nezinto ezizodwa ezibini ezizodwa.
Umdlalo we-Universal ubhekisa kulungelelwaniso olufanayo olunokubambelela ezimbini okanye ngaphezulu kweentlobo ezimbini zemisebenzi, umzekelo, i-jaw chuck, i-jaw chuck, i-clamp yasentwasahlobo, kunye ne-mandrel kwindalo yonke.
Umdlalo okhethekileyo ulungelelwaniso olwenzelwe ngokukodwa ukuqhubekeka nomsebenzi othile ochaziweyo wenkqubo ethile.
Ukuba yahlulwe ngokweempawu zokudityaniswa kwezinto, kukho izinto ezingenakulungiswa kwaye zinokuphinda ziphinde zenziwe, eyokugqibela ibizwa ngokuba yimodyuli.
Umdlalo kunye nomgangatho onokuthenjwa unokuqinisekisa umgangatho wemveliso, ukuphucula ukusebenza ngokuchanekileyo kunye nokwandisa ubungakanani bokusetyenziswa kwezixhobo zomatshini.
Kumsebenzi we-lathe, uninzi lokusetyenziswa kwendawo yokusebenza okanye indawo engenanto ye-cylindrical.
-Imihlathi chuck chuck, yahlulwe manual, zombane, womoya, ngesanti kubunzulu baphantsi ezintathu, ngokweemfuno zabathengi ezahlukeneyo, ungakhetha. Ukuvula iziko kwi-hydraulic chuck ukusetyenziswa ngakumbi, iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo. Ifanelekile ekusebenziseni ibhetshi.
Xa kuthelekiswa ne lathes yesiqhelo, lathes CNC ngokubanzi sebenzisa CNC isixhobo tower, yahlulwe nkqo nkqo kunye tye. Kukho izitishi ezi-4, izitishi ezisi-8 kunye nezikhululo ezili-12 onokukhetha kuzo. Izikhululo ezingaphezulu, ixabiso liphezulu. Iindidi ezahlukileyo zokuqhuba zinokwahlulwa zibe ziinqaba zombane. Ngokubanzi, ixabiso lemela yombane yombane litshiphu kakhulu. Ngokufaka inkqubo kwinkqubo ye-CNC, inkqubo ye-CNC yokukhutshwa kwempawu kwinqaba yokusika, utshintsho lwesixhobo esizenzekelayo. Ukusebenza okuphezulu.
Umsila kunye ne-chuck zisebenza kunye ukulungisa i-workpiece. Isihlalo somsila sinesihlalo somsila, isihlalo somsila we-hydraulic, isihlalo somsila womoya.
Umatshini wokususa i-Chip: Xa kuguqulwa iziko, i-scrap iya kunqunyulwa, okulula ukuqokelela ixesha elide. Umatshini wokususa i-chip unokusetyenziselwa ukususwa kwe-chip. Isinyithi esilahliweyo siya kusiwa kwisithuthi sangaphandle ngokusebenzisa umqolo wetyathanga kunyango olumanyeneyo.
Umatshini wentsimbi yeLathe
Injini yomatshini weLathe
Umatshini wokukhuphela i-CNC
Metal Horizontal Cutting Band Saw
100+ abasebenzi abanezakhono zobungcali.
Iminyaka engama-15 + yamava